Amadolobha Athulile Ase-10 eMelika - Ukuhamba
Amadolobha Athulile Ase-10 eMelika
10 Quiet Beach Towns America
Ihlobo lisondele kakhulu ungalinambitha. (Futhi kunambitheka njengeCarvel ne-sunscreen, i-FYI.) Kepha uma unjengathi, imicabango yakho yokuthamela ilanga ayibandakanyi ukugoba indlela yakho ungene ogwini olugcwele abantu. Lapha, amadolobha ayishumi amahle kakhulu asolwandle ezweni, lapho ungeke uhlangane nabavakashi be-gazillion. Futhi, sifake izindlu eziqashiwe ezizimele zokuhlala ngenkathi usekhaleni elisuka ku-Homes & Villas nguMarriott International, iVrbo nokuningi.
OKUSHIWO: Ibhishi Elihamba Phambili Kuwo Wonke Amazwe AseMelika Oyedwa
Serbek / Getty Izithombe
1. Esikhundleni se-BIG SUR, ZAMA I-GROVE YOKUDLA
Amawa amadwala aseBig Sur ayamangalisa, kodwa ukuthola okunye okuhle futhi okuncane kakhulu eCalifornia, zama le ndawo ethulile ebekwe phakathi kweMonterey neCarmel. Yize ubukhulu bayo, iPacific Grove inama-B & B amaningi kunanoma iliphi elinye idolobha elisogwini phakathi kweSan Francisco neLos Angeles.
Indlwana ethokomele yasePacific Grove (izivakashi ezi-2) : $ 150 / ubusuku
I-Oceanview Designer Beach House (izivakashi ezi-4) : $ 317 / ubusuku
Ikhaya lase-Oceanfront elinokubukwa (izivakashi eziyi-7) : $ 325 / ubusuku
mirceax / Getty Izithombe
2. Esikhundleni se-CAPE COD, ZAMA LUBEC
Ifuna okwakudala Intelezi yaseNew England ngaphandle kwesigcawu? Etholakala ngasemngceleni waseCanada, leli dolobha laseMaine lolwandle linebanga elingamakhilomitha angama-97, izindawo zokukhanyisa ezimbili nedolobha eligcwele izakhiwo zesitayela se-Greek Revival. Futhi, iyi-hop, yeqa futhi yeqa umngcele oya eCampobello Island, indawo eyayihlala ekhaya lasehlobo iRoosevelt manje eseyipaki kazwelonke.
umehluko phakathi kwe-baking soda ne-baking powder yesikhumba
Indawo yangasese yolwandle eyimfihlo (izivakashi ezi-4) : $ 250 / ubusuku
Ikhaya le-Cottage Style (izivakashi eziyi-6) : $ 207 / ubusuku
ILubec Seaside Retreat (izivakashi eziyi-11) : $ 412 / ubusuku
Thomas Northcut / Getty Izithombe
3. Esikhundleni SE-KIAWAH ISLAND, ZAMA ISABHILI LESIQHINGA
Kungahle kungabi khona izindawo zokudlela noma izitolo kulokhu kuphunyuka okuthulile kwaseNingizimu Carolina kepha okungenakho ezintweni zokusiza, kungaphezulu kokuzenzela ubuhle obufihlekile. Abantu bendawo bayakujabulela ukuhamba ngebhayisikili noma ukudoba esihlabathini segolide saseNorth Beach kodwa isikhathi sethu esedlule esithandayo? Ukubona ihlengethwa (yebo, ngempela). Futhi besingadlali lapho sithi le ndawo icashile — ISouthbrook Island ngumphakathi onamasango futhi izivakashi kufanele yenza i-aphoyintimenti ngocingo ukuze uvakashele .
ICreek Watch Villa (izivakashi eziyi-6) : $ 153 / ubusuku
Kubuyekezwe i-Seabrook Villa (izivakashi eziyi-8) : $ 89 / ubusuku
I-Oaks Five Coastal Cottage (izivakashi eziyi-11) : $ 132 / ubusuku
sbonk / Getty Izithombe
4. ESIKHUNDLENI SE-VIRGINIA BEACH, ZAMA ISIQHINGA SASESINYANISI
Ingabe lelo poni lasendle? I-Yep, futhi bebekulesi siqhingi nje ngasogwini lwaseVirginia amakhulu eminyaka. Konke kuyingxenye ye-Assateague Island National Seashore engamakhilomitha angu-37 ubude - lapho uzobona khona izindwandwe, abagawuli bezinkuni nezimpungushe ngenkathi ushiswa yilanga.
ICozy Island Cottage (izivakashi ezi-4) : $ 321 / ubusuku
I-Beautiful Waterview (izivakashi eziyi-6) : $ 175 / ubusuku
Ikhaya Lasemanzini (izivakashi eziyi-8) : $ 162 / ubusuku
UJon Lovette / Getty Izithombe
5. Esikhundleni se-HAMPTONS, ZAMA IKAPA
Kungaba yiJersey, kodwa lokhu okuqinisekile akuyona iSnooki's Jersey Shore. Idolobha elihle lasolwandle eligqoke i-Victorian laseCape May lifana neSan Francisco ihlangana neMontauk. Hamba ngebhayisikili ngasemgwaqweni, hamba izinto zasendulo futhi uthathe ukudla okumnandi ku Ikhishi Langempela LaseFudge .
ICape May Condo (izivakashi ezi-3) : $ 275 / ubusuku
Indlu enhle eduzane nolwandle (izivakashi eziyi-6) : $ 300 / ubusuku
I-Beach Front Home With Pool (izivakashi eziyi-8) : $ 280 / ubusuku
Ungadla kalula ekhaya ngokushesha
jenmstrong / Getty Izithombe
6. ESIKHUNDLENI SEZIQHINGA ZESAN JUAN, ZAMA ICANON BEACH
Uma uthanda i-Pacific Northwest vibe ekhululekile ye-Washington State's San Juan Islands, nakanjani uzothanda indlela yase-Oregon engahambanga kangako eCannon Beach. Le ndawo i-chockablock enamalunga okudla kwasolwandle, imidwebo yobuciko kanye ne-distillery. Isimangalo salo sangempela sodumo, yiHaystack Rock — uyazi, lowo omkhumbula kahle Ama-Goonies.
ILa Bella Vita (izivakashi ezi-4) : $ 139 / ubusuku
UHarrison Loft (izivakashi eziyi-6) : $ 201 / ubusuku
U-Lewis no-Clark House (izivakashi eziyi-8) : $ 264 / ubusuku
UGregory Kurpiel / Getty Izithombe
7. Esikhundleni samabhange angaphandle, ZAMA ISIKHATHI SEGULF
Amabhishi ase-Gulf Coast e-Alabama mhlawumbe ayindawo eheha izwe. Cabanga ngezihlabathi ezinhle kakhulu, izindlu ze-pastel kanye nokudla okuningi kwasolwandle okusha. Ungaze ubambe isimanga semvelo esingajwayelekile esaziwa ngokuthi amajubili (ubusuku obungahleliwe lapho izinkalankala nezinhlanzi zingqubeka ngokungahambi kahle ogwini).
I-Oceanfront Condo enokubukwa okuhle (izivakashi ezi-4) : $ 209 / ubusuku
I-Beachside Condo (izivakashi eziyi-6) : $ 219 / ubusuku
IBlue and Beautiful Oceanfront Condo (izivakashi eziyi-8) : $ 340 / ubusuku
Sarasota_Tim / Getty Izithombe
8. Esikhundleni se-KEY WEST, ZAMA I-BOCA GRANDE
I-Key West inokuthula uma iqhathaniswa neMiami, kepha kukude kakhulu nedolobha lolwandle elilele ukubalekela wena ngempela ufuna. IBoca Grande, ngakolunye uhlangothi, ingumbono weqiniso weFlorida yakudala enhle. Cabanga: imigwaqo emise izihlahla engenawo amalambu omgwaqo nobubanzi obude bolwandle oluzolile lwaseGulf of Mexico.
amakhambi enziwe enzelwe ukuwa kwezinwele nodaka
I-Spanish Style Guest House (izivakashi ezi-2) : $ 284 / ubusuku
Indlwana Emnandi Emgodini Womlando (izivakashi ezi-4) : $ 450 / ubusuku
Ikhaya le-New Beach elimangalisayo (izivakashi eziyi-10) : $ 1,300 / ubusuku
mdgmorris / Getty Izithombe
9. Esikhundleni SE-OCEAN CITY, ZAMA UKUVUSELELA I-BEACH
Lesi sakhiwo esidala sasebhishi esidala siyimpendulo kaDelaware emzabalazweni wase-Ocean City, futhi uqhosha ngazo zonke izisekelo zasogwini lwakho — i-taffy yamanzi anosawoti, u-ayisikhilimu othambile, ipaki lokuzijabulisa elineminyaka engu-50 ubudala — ngaphandle kwama-co-eds we-jam- i-boardwalk egcwele.
I-Montego Bay Colonial (izivakashi ezi-5) : $ 118 / ubusuku
I-Lovely Sea Colony Escape (izivakashi eziyi-6) : $ 157 / ubusuku
I-Expansive New Build Near Bethany Beach (izivakashi eziyi-10) : $ 289 / ubusuku
TedVDH / Getty Izithombe
10. ESIKHUNDLENI SOKUHAMBA NOMUZI, ZAMA IPHEPHA LAMANZI
ITraverse City, eMichigan, isiphenduke into yokudla ezindaweni zokudla eminyakeni yamuva nje — idonsela izixuku ngezindawo zayo zokudlela nezindawo zewayini ezithole imiklomelo. Kepha uma ukhetha ukweqa ukuxokozela uthandele, ukuthula, iya edolobheni elincane lasePentwater. Lesi siqeshana esisogwini lweLake Michigan sinamabhishi anesihlabathi esimhlophe acwebile kanjalo nezindunduma, ungafunga ukuthi empeleni ubusolwandle.
ICondo enhle enamakamelo amabili (izivakashi ezi-4) : $ 250 / ubusuku
V i-acation Haven Pentwater Lake Cottage (izivakashi ezi-5 ) : $ 167 / ubusuku
Indlwana Ebukekayo yePentwater (izivakashi eziyi-6) : $ 271 / ubusuku
OKUSHIWO: Amadolobha ahamba phambili eLake eMelika
ama-movie wakamuva wezothando zothando
uhlu lwamafilimu obusha be-2017
i-baking soda face wash nsuku zonke
uchungechunge njenge-downton abbey
ukudla kwendabuko e-china